करोडतिर त मनै जाँदैन, भावीले अर्बै अर्ब चलाउन लेख्द्या छ रे : बाँस्कोटा – AayoMail
करोडतिर त मनै जाँदैन, भावीले अर्बै अर्ब चलाउन लेख्द्या छ रे : बाँस्कोटा
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २७ गते १४:२५
पद गुमाएपछि पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा बेलाबेलामा सामाजिक सन्जालमा छाइरहन्छन् ‘उत्तेजक अभिव्यक्ति’ दिएर। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको अरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
सरकारबाहिर रहे पनि उनले राजनीतिक विषयवस्तुमा निरन्तर आफ्नो विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। ७० करोड बार्गेनिङको आरोप लागेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर ‘७० करोड’ भन्दै उनको ट्रोलसमेत बनेको थियो।
यस्तै, मंगलबार उनले ट्विटरमा काभ्रेलीका नाममा भावीले अर्बै अर्ब चलाउन लेखेको बताएका छन्। आफूलाई भावीले अर्बै अर्ब चलाउन लेखिदिएको त्यो पनि काभ्रेलीका नाममा भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। ट्विटमा उनले करोडतिर आफ्नो मनै नजानेसमेत बताएका छन्। रिस गर्ने रिसैले जल्ने तथा आफ्नो योजना दुईचार अर्बकै भएको लेखेका छन्।
‘साथीहरुको मनै त्यस्तो क्या ! करोडतिर मनै जाँदैन मेरो। रिस गर्ने रिसैले जलन। योजना त दुईचार अरबकै हो। के गर्ने त भावीले अर्बै अर्ब चलाउन लेख्दया छ रे! काभ्रेलीका नाममा।’
काभ्रेको पनौती-१ चिसापानी पुगेर तस्बिर राख्दै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो लेखेका हुन् । तस्बिर हेर्दा उनी त्यहाँ कुनै आयोजना निर्माणस्थलको स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेको जस्तो देखिन्छ। उनले पनौतीमा केही त केही हुन्छ भनेका छन्।
ट्विटमा उनले लेखेका छन्, ‘वर्षायाममा कुहिरो र हिउँदमा न्यानो घाम अनि आँखैमा छ्याङ्ग खुलेको हिमाल ठोक्किन आईपुग्ने पनौति १ चिसापानीमा पनि केही त हुन्छ हुन्छ जस्तो पो लाग्दैछ त। मिठो प्रतिफलको शिघ्र प्रतिक्षामा !!’
साथीहरुकाे मनै त्यस्ताे क्या ! कराेडतिर मनै जादैन मेराे।रिस गर्ने रिसैले जलन।याेजना त दुईचार अरबकै हाे।के गर्ने त भावीले अरब अरबै चलाउन लेख्दया छ रे!काभ्रेलीका नाममा।
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) August 11, 2020